परमेश्वरको शक्ति को विशालता कसरी असीमित प्राणीले केहि बनाउनबाट केही गर्न सक्दछ? हारून यूसुफ Hackett | दर्शन |05 / 04 /20 | Lost Sheep for Christ
भगवान बोल्नुहुन्छ, चीजहरू हुन्छन्
उत्पत्तिको कथा हामी धेरैलाई थाहा छ। त्यो छ दिनमा परमेश्वरले सब थोक सृष्टि गर्नुभयो र सातौं दिनमा उहाँ विश्राम लिनुभयो। के तपाईंले कहिल्यै आफूलाई सोच्नुभएको छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँसँग कति शक्ति छ र यो ब्रह्माण्ड कसरी बनाउन सम्भव छ? परमेश्वर त्यस्तो प्राणी हुनुहुन्छ जुन केवल आफैंमा अद्वितीय छ। ब्रह्माण्डको निर्माणमा अरु बाह्य शक्तिहरूले उसलाई सहायता गरेनन्। तसर्थ, ज्ञात ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उत्पत्ति अध्याय एकलाई तोडौं।
उत्पत्ति १: १–5 “आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी कुनै रूप र शून्य थिएन, र अन्धकार गहिरो को अनुहार मा थियो। परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “उज्यालो होस्! र त्यहाँ प्रकाश थियो। र परमेश्वरको ज्योति राम्रो थियो देखे; अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई अँध्यारोबाट अलग गर्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भनेर बोलाउनु भयो। र त्यहाँ साँझ र बिहान थियो, एक दिन ” ।
सृष्टि गरिएको अस्तित्व “स्वाभाविक रूपमा प्रत्यारोपित” हो। हाम्रो मानवीय बुद्धिको भित्र भित्र, हामी जान्दछौं कि त्यहाँ केहि छ। हामीलाई थाहा छैन “कति ठूलो” मापनको हिसाबले परमेश्वर हुनुहुन्छ, न त कसैले उहाँको अनुहार वर्णन गर्न कसैले उहाँको अनुहार देखेका छन। एकचोटि हामी स्वर्गमा पसेका छौं र बीटिएट भिजनमा उहाँलाई मजा लिने छौं, हामी केवल परमेश्वरलाई देख्नेछौं। अब कसैले तपाईंलाई भन्ला, “यदि मैले भगवानलाई देख्न सकिनँ, तब उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्न”। मात्र किनकि म मेरो ना eye्गो आँखाले आफ्नै डीएनए देख्न सक्दिन, तथ्यलाई हटाउँदैन, कि मसँग एक विशिष्ट प्रकारको डीएनए छ जुन मेरो सृष्टि गरिएको हो। हामी भगवानलाई आकाशीय अर्थमा बुझ्छौं। सेन्ट थॉमस अक्विनसले आफ्नो सुमा थियोलोजीकामा लेखेका छन् कि “प्रेरित भन्छन्:” उहाँका अदृश्य चीजहरू प्रस्टै देखियो, ती बनाइएका चीजहरूले बुझ्दछन् “(रोमी १:२०)। तर यो तबसम्म हुने थिएन जबसम्म सृष्टि गरिएका थोकहरू मार्फत परमेश्वरको अस्तित्वको प्रदर्शन हुँदैन। पहिलो कुराको लागि हामीले कुनै चीजको बारेमा जान्नु आवश्यक छ कि यो अवस्थित छ कि छैन।
म उत्तर दिन्छु कि, प्रदर्शन दुई तरीकाले गर्न सकिन्छ: एउटा कारण मार्फत हो, र यसलाई “प्राइमरी” भनिन्छ, र यो भनेको जुन कुरा बिल्कुलसँग छ त्यसबाट बहस गर्नु हो। अर्को प्रभावको माध्यमबाट हो , र प्रदर्शनलाई “पोस्टरियोरी” भनिन्छ; यो भन्दा पहिले हामीलाई तुलनात्मक रूपमा के हो भनेर बहस गर्न छ। जब प्रभाव हामीलाई यसको कारण भन्दा राम्रोसँग चिनिन्छ, प्रभावबाट हामी कारणको ज्ञानमा अगाडि बढ्छौं। र हरेक प्रभावबाट यसको उचित कारणको अस्तित्व प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, जबसम्म यसको प्रभावहरू हामीलाई राम्रोसँग चिनिन्छ; किनकि किनकि हरेक प्रभाव यसको कारणमा निर्भर गर्दछ, यदि प्रभाव अवस्थित छ भने, कारण पूर्व-अवस्थित हुनुपर्दछ। तसर्थ, परमेश्वरको अस्तित्व, जहाँसम्म यो हामी आफैंमा स्पष्ट छैन, उहाँबाट प्रभावित हुनसक्दछ जुन हामीलाई थाहा छ। ईश्वर मेरो लागि एउटा अस्तित्व हुनुहुन्छ, यति शुद्ध हुनुहुन्छ कि मेरो आफ्नै मानसिक कारणले उसलाई चित्रण गर्न सक्दैन, तर उसको अस्तित्व हाम्रो वरिपरि छ। उहाँ पनि शुद्ध सार हुनुहुन्छ। हामी सारलाई पदार्थको रूपमा परिभाषित गर्दछौं। यसको मतलव परमेश्वर, अद्वितीय हुनुहुन्छ, एक प्रकारको, उहाँ प्रतिकृति हुन सक्नुहुन्न। यो मेरो शरीर र प्राणसँग तुलना गर्न उस्तै छैन, किनकि दुबै चीजहरू एकदम भिन्न प्रकारका छन्, यद्यपि तिनीहरू मलाई एक बनाउनको लागि एक अर्कामा मिलेर काम गर्छन्। मेरो आत्माले मेरो शारीरिक शरीरसँग मिल्दो जुल्दो काम गरिरहेको छ, किनकि यसले मेरो कामलाई शारीरिक अर्थमा शक्ति दिन्छ, र मेरो प्राणबिना मेरो शरीरको भौतिक चीजको कुनै आन्दोलन हुँदैन र यो केवल जैविक ऊतकको खाली शेल मात्र हुने थियो। मेरो आत्माले मलाई चारैतिर घुम्न, खाने र दिन प्रति दिन कार्य गर्ने क्षमता दिन सहयोग गर्दछ। भगवानलाई काम गर्न शरीर चाहिंदैन, तर उहाँको वचनले, संसार आफैं अस्तित्वमा हुन सक्छ। एक व्यक्तिले केवल भगवानको दिमाग कत्तिको विशाल छ भनेर कल्पना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि सूर्यको बारेमा सोच्नुहोस्। श्री रोन कुर्तसको अनुसन्धानको आधारमा, हामीलाई थाहा छ कि सूर्यमा “करीव %०% हाइड्रोजन, २ 28% हेलियम र २% धातुहरू हुन्छन्। अन्य विशेषताहरू यसको परिक्रमण, तापमान र विकिरण हो। ”  हामीलाई यो पनि थाहा छ सूर्य यसको केन्द्र कोरमा १ 15,6०००० सी छ। ठीक छ यदि विज्ञानले सूर्यको कार्यको व्याख्या गर्न केहि गणितीय सूत्रहरु प्रमाणित गर्न सक्छ, तब त्यहाँ भगवान हुनुहुन्न। म जोड दिन्छु कि यदि हामी सूर्यको व्यास के हो, वा सूर्यको व्यास पृथ्वीसँग कत्तिको तुलना गर्छौं, गणितिय तथ्या created्कमा पनि, सूर्यको आकार किन बनाइएको थियो भन्ने कुराको विचारले यसलाई हटाउँदैन । यो हो, वा किन हामीलाई बिरुवाहरू बढ्नको लागि सूर्यको आवश्यकता छ, मानव मानिसहरूलाई न्यानोपन प्रदान गर्नुहोस्। सूर्य “कतै पनि पप आउट छैन”। म तर्क गर्छु कि यदि सूर्य कतैबाट बाहिर पप भयो भने , त्यसोभए किन यो चराको आकारको रूपमा बाहिर निस्किएन, किन तातो छ वा मलाई कसरी थाहा छ कि यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ ?
आज हामीले निर्भर हुन आएका सबै स्रोतहरू भएको पृथ्वीको मोह मात्र “दुर्घटना” होइन। परमेश्वरले पानीलाई छुट्टिनुभयो र आकाश र समुद्र बनाउनुभयो। कसरी एक व्यक्ति एक शारीरिक विभाजन बनाउन र आकाश र समुद्र बनाउन सक्छ? खगोलविद्हरूले पत्ता लगाए कि ब्रह्माण्ड धेरै हदसम्म हाइड्रोजन र हीलियम थियो ( हेलियम हाइड्रिड आयन ( HeH +)] , यो अणु ब्रह्माण्डमा उर्जाको स्रोत थियो। यो अणु कत्तिको चाँडो चलिरहेको थियो भन्नेमा आधारित, यसले अक्सिजन बाहिर हटाएर पानीको अणुलाई धकेल्न सक्थ्यो? H2O अणुहरूमध्ये सबैभन्दा सानो हो। त्यसोभए, तपाई सम्भवतः कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि कत्ति भारी तरल कत्ति छ, ग्याससँग तुलना गर्नुहोस् । हामी बाफ देख्न सक्दैनौं, यो सजिलैसँग यो कसरी वर्णन गरिएको थियो वर्णन गर्न सक्दछौं? के यो उही उर्जा थियो जसले स्वर्गलाई समुद्रबाट अलग गर्यो? दार्शनिक डेभिड ह्यूम भन्थे, “यदि एक दार्शनिकको रूपमा, यदि म शुद्ध दार्शनिक श्रोताहरूसँग बोल्दै थिएँ भने मैले आफुलाई अज्ञेयवादी भनेर वर्णन गर्नु पर्छ , किनकि मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ निर्णायक तर्क छ जुन त्यहाँ एक प्रमाणित गरेर हो भगवान छैनन्।
अर्कोतर्फ, यदि म सडकमा साधारण व्यक्तिलाई सहि व्यक्त गर्न चाहन्छु भने मलाई लाग्छ कि म नास्तिक हुँ भनेर भन्नु पर्छ, किनकि जब म भन्छु कि म ईश्वर छैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्दिन, मैले समान रूपमा थप्नुहोस् कि म प्रमाणित गर्न सक्दिन कि होमिक देवताहरू छैनन्। ” यसले मलाई भन्दछ कि कुनै कुराको लागि त्यहाँ चारै तिर फ्लोट गर्नु र केवल चीजहरू भयो, यो मेरो कल्पनाको मूर्ति मात्र हो। विज्ञानले भर्खरै वर्णन गरेको छ कि यो घटना कसरी भयो र प्रमाणित गर्‍यो कि हामीलाई आकाश र समुद्र बनाउन र सुख्खा भूमि देखिनको लागि हामीलाई भगवानको आवश्यकता पर्दैन। सबै कुरा द्रुत रूपमा भयो र विश्वव्यापी भावना यसको सम्बन्धित क्रममा स्थानमा । पर्याप्त कारणको अभावको कारणले, ब्रह्माण्डको ईतिहासमा यस घटनामा परमेश्वर वा अरू कुनै भूमिका खेलेको प्रमाण छैन।
म दाऊदले Hume खण्डन थियो र पनि भन्न यो शारीरिक घटना बाटो यसलाई गरे भयो, र हामी हेर्न छैन, यो कि होइन परमेश्वरको बनाउन त्यहाँ थिएन हुन एड । बस “ठूलो-धमाका सिद्धान्त वरिपरि फालिएको ” एक एक s यो शारीरिक घटना ठाउँ लिन कारण पनि छ पर्याप्त । के कारणले गर्दा पनि यो सुरु गर्न पनि पुग्यो? केहि भर्खर यसलाई गतिमा राख्नु पर्छ। बस आफ्नै मा विभाजन गर्न पानी दुई शरीर को लागि, मा खडा गर्दैन यसको आफ्नै दुई खुट्टा। सेन्ट थॉमस अक्विनस एक बाह्य कारणको सवालमा आफ्नो उत्तर साझा गर्छन् जुन सँधै सक्रिय हुन्छ। ” पहिलो र थप प्रकट तरीका गति बाट तर्क हो। यो निश्चित छ, र हाम्रो इन्द्रियलाई स्पष्ट छ, संसारमा केहि चीजहरू चालमा छन्। अब जे गतिमा छ उसले अर्कोलाई गतिमा राख्दछ किनकि कुनै गतिमा हुन सक्दैन बाहेक यो गतिमा रहेको सम्भाव्यतामा बाहेक; जबकि एक कार्य inasmuch चाल मा यो कार्य मा छ। गति को लागी क्षमता देखि वास्तविकता को लागी केहि को कटौती बाहेक अरु केहि छैन। तर वास्तविकतामा संभावनाबाट केही पनि कम गर्न सकिदैन, वास्तविकताको अवस्थामा बाहेक केही। यसरी जुन वास्तवमा तातो छ आगो जस्तै आगोले काठलाई बनाउँदछ, जुन सम्भावित तातो छ, वास्तवमा तातो हुनुको निम्ति, र यसैले चाल र यसलाई परिवर्तन गर्दछ। अब यो सम्भव छैन कि समान चीज एकैचोटि वास्तविकता र क्षमतामा समान आदरको साथ हुनुपर्दछ, तर केवल भिन्न भिन्न पक्षहरूमा। केको लागि वास्तवमा तातो छ एकै साथ सम्भावित तातो हुन सक्दैन; तर यो एकै साथ सम्भावित चिसो पनि छ। यो असम्भव छ कि समान आदर र उही तरिकामा कुनै चीज दुबैमा मूभर र सार्नु पर्छ, अर्थात् कि यो आफैमा सर्नु पर्छ। तसर्थ, के गति मा छ एक अर्को द्वारा गति मा राख्नु पर्छ। यदि यसलाई जुन गतिमा राखिएको छ आफैमा गतिमा राख्नुपर्दछ भने यसलाई पनि अर्कोले गतिमा राख्नुपर्दछ, र त्यो अर्को अर्कैद्वारा। तर यो अनन्ततामा जान सक्दैन, किनकि त्यहाँ त्यहाँ पहिले पहिलो मूभर हुनेछैन, र यसको फलस्वरूप, कुनै अन्य मूभर हुनेछैन; देख्दछ कि पछि सार्नेहरू मात्र inasmuch सार्न को रूप मा तिनीहरू पहिलो चालक द्वारा गति मा राखिएको छ; स्टाफ चालित रूपमा मात्र यो हात द्वारा गति मा राखिएको छ किनभने। तसर्थ, यो पहिलो mover मा पुग्न आवश्यक छ, कुनै अन्य द्वारा चालमा राखिएको; र यो सबैले परमेश्वर हुन भनेर बुझ्दछन्। ” ]
अरु कुन शक्तिले ब्रह्माण्ड बनायो? के त्यहाँ अर्का सर्वोच्च व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले जुम्ल्याहा भाइले जस्तै भगवानको साथमा काम गर्नुभयो वा त्यहाँ प्राकृतिक र अलौकिक घटनाहरूको संयोजन हुन सक्दछ कि जसले हामीलाई थाहा भएको ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्दछ? अझ विशेष गरी, बिग बै Bangले अवलोकनयोग्य ब्रह्माण्डको जन्मलाई पनि संकेत गर्न सक्छ – त्यो क्षण केहि परिवर्तन भएको थियो, जुन घटनाहरूले किकस्टार्ट गर्दै आजको घटनालाई अघि बढायो। समकालीन बेल्जियमको भौतिकशास्त्री जर्ज लेमेट्रेले ब्रह्माण्डको विस्तार कसरी भयो भनेर वर्णन गर्न एडविन हबलको डाटा प्रयोग गरे। ] ब्ल्याकहोलदेखि मिल्की मार्गमा, हाम्रो ब्रह्माण्ड धेरै मध्ये एक मात्र हो र वैज्ञानिकहरूले अझै पनि हाम्रो आकाशगंगाको गहिराईता अन्य आकाशगंगामा खोजिरहेका छन् जुन अवस्थित हुन सक्छ। यी तातो ग्यासहरू जसले यी सबै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र परमाणुहरू बनाउँदछन्, पृथ्वी, ग्रह, वायु, पानी आदि बनाउँछन्, यसले विकासको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ कि केहि पनि बाहिर देखा पर्दैन र यी अनियन्त्रित घटनाहरूले हाम्रो ज्ञात अस्तित्वलाई सिर्जना गर्दछ। यी अणुहरु सिर्जना सबै भन्दा राम्रो पाहुना प्रजाति (मानव, बिरुवाहरु, तारा, ठाउँ) बस ठाँउ मा फारम थाले र सबै। त्यसोभए, यदि तपाईं केहि कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, त्यसो भए यो घटनालाई परमेश्वर सहायताको आवश्यक छ वा यो अज्ञात घटना परमेश्वर हुने भन्ने प्रमाणको रूपमा लिनेछ। यस घटनालाई मेटाफिजिकलले अर्को “अस्तित्व” को रूपमा लिने भएकोले के यसले आफ्नो सृजनात्मक शक्तिमा सीमित बनाउँछ? परमेश्वरको अस्तित्वको दोस्रो प्रमाण, को बाट लिएको सकिन्छ Summa Theologiae (प्राइमा अनु Q.3) “दोस्रो तरिका कुशल कारण प्रकृति हो। अर्थको संसारमा हामी फेला पार्दछौं त्यहाँ कुशल कारणहरूको क्रम छ। त्यहाँ कुनै केस थाहा छैन (न त यो साँच्चै नै सम्भव छ) जसमा कुनै चीज आफैंको कारक कारण भएको पाइएको छ; किनकि यो आफैंभन्दा पहिले असम्भव छ। अब कुशल कारणहरूमा यो अनन्तमा जान सम्भव छैन, किनकि सबै कुशल कारणहरूमा क्रमबद्ध रूपमा क्रमशः, पहिलो मध्यवर्ती कारणको कारण हो, र मध्यवर्ती भनेको अन्तिम कारणको कारण हो, चाहे मध्यवर्ती कारण धेरै होस्। , वा केवल एक। अब कारण हटाउनको लागि प्रभाव हटाउनु हो। तसर्थ, यदि कुशल कारणहरू बीच कुनै पहिलो कारण छैन भने, त्यहाँ कुनै अन्तिम, न त कुनै मध्यवर्ती कारण हुनेछ। तर यदि कुशल कारणहरूमा यो अनन्तमा जान सम्भव छ भने, त्यहाँ कुनै पहिलो कुशल कारण हुनेछ, न त त्यहाँ एक अन्तिम प्रभाव हुनेछ, न त कुनै मध्यवर्ती कुशल कारणहरू; ती सबै स्पष्ट रूपमा गलत छ। त्यसकारण पहिलो कार्यकुशल कारण स्वीकार गर्नु आवश्यक छ, जसमा सबैले परमेश्वरको नाम दिन्छन्। ”
यो सिद्धान्त देखिन्छ गर्न किनभने, Immanuel Kant, जर्मन दार्शनिक को सहयोग हुन “हामी वास्तविकता नै कहिल्यै थाहा हुन सक्छ” । समय र अन्तरिक्षको सृष्टिको सुरूमै मानिस अस्तित्वमा नभएकोले डा। लेमात्रेको यो अमूर्त सिद्धान्तले यी दिनहरूका दैनिक जीवनमा हामीलाई असर गर्ने भएकोले ध्वंसनीय छ । हामीलाई सूर्यलाई तातो राख्न, खाना उब्जाउन, वातावरणबाट कार्बन डाइअक्साइड प्राप्त गरेर बोटलाई सहयोग गर्न र त्यसपछि सूर्यको प्रकाशको प्रयोग गरेर यसको उर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक छ (प्रकाश संश्लेषण ) ] । हामीले सूर्यको शक्ति उपयोग गर्न टेक्नोलोजीहरू विकास गरेका छौं र बिजुली, अर्थात् सौर्य प्यानलहरू निर्माण गर्न सक्षम भएका छौं। यी ज्ञानी अनुभवहरू हामी आफैंले महसुस गर्छौं, र यो हाम्रो बौद्धिक जानकारीले हाम्रो तर्क क्षमताहरूमा आउँदै गरेको सूचना प्रक्रिया गर्दछ। मेरो लागि, यसले मेरो लागि ठोस आधार प्रदान गर्दैन कि अर्को शक्तिले ज्ञात ब्रह्माण्ड बनाउन भगवानसँग कार्य गरिरहेको छ। यो “सिद्धान्त” लाई सत्य हुनलाई बुझ्नको लागि म एर्ट टी टोट लगाउँदिन , त्यसो भए यसले बाइबलमा भगवानको कमजोरी देखाउँदछ। यसको मतलब त्यो हो कि उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ सबै कुरा जान्ने र सबै प्रामाणिक हुनुहुन्न। यसले मेटाफिजिक्सको कुनै अध्ययन बेकार हुनेछ भनेर पनि अस्वीकार गर्दछ, किनकि यो “ठोस, वैज्ञानिक तथ्य” मा आधारित छैन, सत्यको खोजी हाम्रो मानसिक तर्कको हाम्रो व्याख्यामा आधारित हुनुपर्दछ। परमेश्वरको अस्तित्वको प्रकृति भनेको उसले पहिले नै चालमा राखेका बलहरूमा काम गर्नु हो। किनकि गति कुनै चीजबाट हुँदैन, केहि “धक्का” ले सबै कुरा सार्नको लागि छ। “न्यूटनको पहिलो कानूनमा भनिएको छ कि बाह्य शक्तिको कार्यद्वारा आफ्नो राज्य परिवर्तन गर्न बाध्य नगरी प्रत्येक वस्तु आराम वा एक समान गतिमा एक समान रेखामा रहनेछ।” यदि त्यहाँ पानी कदम बनाउन कुनै हावा थियो, गर्न सक्छन् सागर उत्पादन धाराहरु यसको आफ्नै? त्यहाँ गति छैन यदि यसले केहि पनि काम गरेको छैन। पर्याप्त कारण सिद्धान्त अनुसरण गर्दै, Fr. क्लार्क एसजे आफ्नो पुस्तक “द वन र दि धेरै” pg मा। २० वर्णन गर्दछ कि “अस्तित्वमा सुरु हुने प्रत्येकलाई कारण चाहिन्छ । ” हाम्रो अस्तित्व ईश्वरको प्रेममा बाँड्न र सृष्टि गरिएको कुराका आनन्द लिन हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको कारणमा आधारित छ। एक शुद्ध प्राणी हुनु,
 सुमा थ्योलोगेइ: ईश्वरको अस्तित्व (प्राइमा पारस, Q.2)
] Https://skyandtelescope.org/astronomy- News/ astronomers – find – universes – first – molecule/
] सुमा थ्योलोगेइ: ईश्वरको अस्तित्व (प्राइमा पारस, Q..3)
← ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကြီးလှပေ၏ ဘယ်လိုအဆုံးမဲ့ဖြစ်လျက်ရှိနေတာဟာဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အာရုန်သည်ယောသပ်သည် Hackett | ဒန |0င်5/ 04 /20
د خدای د قدرت پراخه څنګه کولی شي یو لامحدود وجود له هیڅ شي څخه یو څه رامینځته کړي؟ هارون جوزف هیکټټ | فلسفه |05 / 04 /20 →